Soo kabashada balwadda - Xarunta Caafimaadka ee Sadler
Daawooyinka Xanuunada Isticmaalka Opiod (MOUD)
Xarun sare oo heer sare ah ahaan, Sadler waxay bixisaa daawaynta xanuunka Isticmaalka Opioid si ay u caawiso bukaanada doonaya inay ka soo kabtaan balwada. Maamule kiis ayaa diyaar u ah inuu kaa caawiyo booqashada. Bixiyeyaasha ayaa diyaar u ah inay kuu qoraan daawo oo ay la socdaan horumarkaaga xagga soo kabashada.
Waxaan diyaarinay koox daryeel iyo naxariis leh oo ah xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka si ay si ku habboon oo qarsoodi ah MOUD ugu bixiso Carlisle oo ay ku jiraan:
Dhakhaatiirta qorida ee shahaadeysan
Dhakhaatiirta caafimaadka dabeecadda
Isku-duwayaasha maamulka kiiska
Waxay wada shaqayn la samaysaa Mashruuca RASE iyo ilaha kale ee bulshada
Aan kugu taageerno wadadii aad ku soo kaban lahayd:
Daawo sax ah oo si fiican loo ilaaliyo si looga hortago damaca
La-talinta iyo daawaynta ayaa diiradda saarey isbeddelka dabeecadda
Adeegyada taageerada oo dhamaystiran oo loo marayo iskaashiga bulshada
Kulamada todobaadlaha ah
Qaab dhismeedka iyo isla xisaabtanka
Nidaam taageero ah oo fahamsan oo aan/xukun lahayn
Helitaanka daryeelka caafimaadka iyo ilkaha
Daawooyin jaban ama aan qiimo lahayn
Habka guud ee taageeraya natiijooyinka bukaan-socodka ee wanaagsan
Koox u dabaaldegaysa guulahaaga
Maxaa barnaamijkan kaga duwan yahay kuwa kale?
Ma daaweyno balwada; qofka oo dhan ayaan la dhaqanaa. Marka la isku daro daawada iyo fadhiyada la-talinta iyo daawaynta, waxaan helnaa sababaha asaasiga ah ee qabatinka waxaanan caawineynaa maareynta kiciyeyaasha. MOUD waxay fududaynaysaa rabitaanka marka aad ka shaqaynayso beddelka maskaxdaada iyo dabeecadahaaga.
Daawo noocee ah ayaa loo qoraa?
Iyadoo ku xiran xaaladda qofka, waxaan caadi ahaan u qornaa daawooyinka sida Buprenorphine (magaca sumadda: Subutex®, Suboxone®, Sublocade®). Mar labaad, waa isku darka daawada iyo la-talinta ka dhigaysa natiijooyinkeenna kuwo aad u guul leh.
Waa maxay Buprenorphine sideese u shaqeysaa?
Buprenorphine waa dawo dhawaanahan, oo ay ansixisay Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka si loogu daweeyo mukhaadaraadka qaarkood, taas oo xannibaysa soo-dhowaynta opioid kana ilaalisa damaca. Marka la barbardhigo methadone, buprenorphine waxay soo saartaa khatar yar oo loogu talagalay xad-dhaafka iyo saameynta ka-noqoshada iyo sidoo kale heerka hoose ee ku-tiirsanaanta.
Tani miyaanay ahayn in hal daroogo lagu beddelo mid kale?
Laqabsigu waa cudur maskaxda ku dhaca. Qaadashada dawooyinka qabatinka opioid waxay la mid tahay qaadashada dawooyinka cudur kasta oo kale. Daawadu waxay u ogolaataa dadka caadaystay inay ka beddelaan diiradda laqabsiga una soo kabtaan si ay dib ugu dhistaan xidhiidhkii ay la lahaayeen qoyska iyo asxaabta oo ay ugu noolaadaan nolol waxtar leh.
MOUD ma yahay xalka qof walba?
Maya Sadler wuu ogyahay in soo kabashadu aanay sahlanayn oo qof kasta oo caadaystay opioids uu la dagaallamayo caqabado kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, qaar ka mid ah, daawaynta ay caawisay daawada opioid ayaa wax walba bedeli karta. Qaar badan, waxay siinaysaa rajo iyo jid ay u soo kabtaan si buuxda.
Sheekooyinka Soo kabashada
Hoos waxaa ah dhowr sheeko oo soo kabasho ah:
Judy waxaa loo qoray dawo xanuun ka dib xaalad degdeg ah oo ilkaha ah. Waxay si degdeg ah u qabatimay oo siddeed sano waxay la halgamaysay ku tiirsanaanta opioids.
“Waxay iga cuntay fikir kasta: Sideen ku helayaa lacagta? Halkee ayaan ka iibsan lahaa kaniiniyada? Daawaynta caawimada dawooyinka ee Sadler ayaa badbaadisay noloshayda. Waxay iga dhigtay inaan rabo inaan maalin kasta kaco. Waxay iga dhigtay inaan nafteyda ka roonaado.”
Saaxiibkii David ayaa siiyay dawo uu u qoray si ay uga caawiso xanuunka dhabarka. Si degdeg ah ayuu ula qabsaday oo maalin walba waxa uu si xun ula dhaqmayay xanuun baabi’iye.
“Kaliya ma ahayn ku takri-falka daawooyinka, iyo daroogada iyo khamriga, waxaan ku xad-gudbay dadka. Naftayda ayaan ku xad-gudbay. Waxaan ku xad-gudbay xiriirka dadka. waan xadi lahaa been baan sheegi lahaa
Kooxda Sadler waxay i siiyeen rajo badan, waxayna ahaayeen kuwo aad u daryeel iyo naxariis badan.”
Markii Jannelle ay ahayd 21, waxay la dhacday dad khaldan. Waxoogaa go’aano liidata ayay samaysay oo waxay qabsatay daroogo uu ka mid yahay heroin-ku. Waxay si xad dhaaf ah u isticmaashay markay uurka lahayd ilmaheedii kowaad.
“Waxaan u qaddarinayaa daawaynta ay caawisay inay iga caawisay inaan miyir qabo siddeed sano. Waxaan dhalay caruur; Waxaan leeyahay cilaaqaad caafimaad qaba; waan guursanayaa Marka la barbardhigo siddeed sano ka hor, noloshu waxay gebi ahaanba isu beddeshay waxa aan u tixgelin lahaa nolol caadi ah.”
Ha u ogolaan balwaduhu inay sii wadaan inay noloshaada la wareegaan.
MOUD waxaa laga yaabaa inay kuu noqoto doorasho wax ku ool ah.
Habka kooxda ee balwadda ayaa wax walba bedesha.
Rajadaada hel . Maanta wac
Xarunta Caafimaadka ee Sadler » Adeegyadayada » Soo kabashada balwadda